Kedu ihe bụ itinye n'ọkwa dabara? itinye n'ọkwa
Home / ngwa / Kwụsị Ịkwado / kedu ihe na-eme ka ọ banye
Category: Kwụsị Ịkwado Tags: ịzụta Ada Ada kwesịrị ekwesị okpomọkụ, induction sistem kpo oku, Mgbaghara na-adaba adaba, ime ka iwepu kpo oku, Na-agba ọsọ kwesịrị ekwesị, mekotaonwe kwesịrị ekwesị gia wiil, mekotaonwe kwesịrị ekwesị Kwadobe, Na-agbapụ eriri kwesịrị ekwesị, Gbanyụọ ihe kwesịrị ekwesị, Kedu ihe na-eme ka ọ ghara ịdaba
Gịnị bụ itinye n'ọdịdị kwesịrị ekwesị?
Mgbaghara na-adaba adaba bụ ọrụ dị mfe nke metụtara ma ọ bụ mkpụmkpụ ma ọ bụ mmụba nke otu akụrụngwa na ihe ọzọ iji kpata nnyonye anya na mmepe nke nrụgide, na-ejikọ ihe abụọ ahụ ọnụ.
Eachzọ ọ bụla e si echekwa akụkụ na mgbakọ nwere uru ndị pụrụ iche. N'ihe banyere ịda mbà, akụkụ ndị sitere na igwe ọ bụla nwere ike ịgbakọta: nchara gaa nchara, nchara ọla kọpa, aluminom na nchara, magnesium na nchara, wdg. nhazi igwe dị ka tempering ma ọ bụ agbaze. N'ihi ohere nke nrụgide nrụgide, a ga-enyocha mmetụta nke ịda mbà kwesịrị ekwesị na mgbakọ dị oke egwu.
Na omume, ọrụ ahụ dị mfe, na-achọ nkwadebe ntakịrị nke ihu, njikwa dị ntakịrị, na enweghị nhicha mgbe mgbakọ gachara. Ebe ọ bụ na ike nchekwa bụ ihe eji arụ ọrụ, nsị ma ọ bụ ịmịcha elu anaghị egbochi, na-ezere mkpa ọ bụla maka iji mgbanwe. Parts kpọkọtara site na ịda mbà dabara nwere ike disassembled site bibiri kpo oku na mpụga akụrụngwa. Usoro a dabara adaba maka ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na oke ọkụ ọkụ ya na oke ya, na-ekwe ka nnọchi nke akụkụ ndị na-eyi akwa ma ọ bụ mmezi nghazi.
Ugbo oku na-enyekarị uru pụrụ iche na ịda mbà. Heating nwere ike metụtara nanị akụkụ ụfọdụ, na-enye mgbasa zuru ezu na mpaghara maka a Ada Ada-kwesịrị ekwesị na-enweghị kpo oku a dum nnukwu mgbatị ma ọ bụ jiri nlezianya machined akụrụngwa, na-ebelata distortion. Igwe a na-eme ngwa ngwa, ihe ndị a họpụtara ahọpụta na-emekwa ka mgbakọ nke ngwa-ngwa dabara, dị ka e kwuru n’elu. Tụkwasị na nke ahụ, ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enye ọkụ na-enweghị ntụpọ, ngwa ngwa, usoro a na-ekwughachi nke nwere ike tinye na mmepụta maka njikwa kacha nta na ngwa ngwa akpaaka.
HLQ induction sistem kpo oku eji na akpakanamde ụlọ ọrụ iji mekotaonwe kwesịrị ekwesị Kwadobe na yiri mgbaaka. Ha na-arụrụ ọrụ idozi ụgbọ elu, ụgbọ oloko na gwongworo. A na-eji sistemụ ekwentị anyị maka ịda mba dabara adaba na nyiwe ndị dị n'akụkụ mmiri ma na-ejiwanye iwepụ nnukwu mkpụrụ na bolts na turbines nke ụlọ ọrụ ike.
Dịka, ọla ga-abawanye na nzaghachi na ikpo ọkụ na nkwekọrịta mgbe ọ jụrụ. A maara nzaghachi a na mgbanwe mgbanwe okpomọkụ dịka mgbasawanye ọkụ. Itinye n'ọdị na ada ndozi kwesịrị ekwesị bụ ebe anyị na-eji mmetụta a ka ọ dabara ma ọ bụ wepu akụkụ. Ngwongwo igwe na-ekpo ọkụ n'etiti 150 Celsius na 300 Celsius nke na-eme ka ọ gbasaa ma nye ohere maka ntinye ma ọ bụ wepu ihe ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ejikọ akụkụ abụọ nke ọkpọkọ ọnụ, otu akụkụ na-ekpo ọkụ ruo mgbe dayameta ya gbasaa nke ga-abawanye n'akụkụ nke ọzọ. Mgbe akụkụ ndị dị nso jikọtara na ọnọdụ okpomọkụ, nkwonkwo ahụ na-enwe nsogbu ma sie ike - 'belata mbe'. N'otu aka ahụ, enwere ike iji mmụba ọkụ na-atọpụ nkwonkwo tupu ịtọpụ.
Nchịkwa usoro, nkwụsi ike, izi ezi na ọsọ bụ uru dị mkpa nke ntinye ntinye. Nnyefe ọkụ nnyefe bụ nnọọ ezi. N'ihi ikpo ọkụ a na-ewepụta n'ime akụrụngwa ahụ, naanị ị na-ekpo akụkụ ahụ ịchọrọ ikpo ọkụ, ọ bụghị ikuku gburugburu ya. Na ibelata ihe ize ndụ nke ịpụ nwanyị, nke a bụ ike. Tụkwasị na nke a, ebe ọ bụ na itinye n'ọkwa na-ewepụta oke ọkụ na-agbanwe agbanwe, nke a na-enyekarị ohere ịme obere okpomọkụ. Okpomoku di nma ma obu ichota oge rampu. N'adịghị ka usoro kpo oku ọdịnala, itinye n'ọkwa anaghị enwu ọkụ. Nke a na-enye ohere iji mee ka ihe ndozi ndọtị jiri dị iche iche rụọ ọrụ na gburugburu obodo, ọkachasị na ngwa petrochemical.
Ebee ka eji ya?
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na ngwa dịgasị iche iche nwere ike irite uru site na ntinye ngwa ngwa. A na-eji sistemu kpo oku a na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ ala iji belata mgbatị kwesịrị ekwesị, na-ebu ma yiri mgbaaka. Ha na-arụrụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị injinịa yana nlekọta ụgbọelu na ụgbọ oloko. A na-eji sistemụ igwe anyị iji belata ọrụ dabara adaba na ụgbọ mmiri na nyiwe nke ime mmiri ma na-ejikwa ya iji kwado ma wepu nnukwu mkpụrụ na bolts na turbines nke ụlọ ọrụ ike yana ntanye na oghere na igwe ọkụ ọkụ.
A na-ejikarị usoro ntinye ihe ntinye eme ihe maka usoro ndị a:
• dabara adaba na gia wiil (pinions na akụ, wdg)
• Ihe mkpuchi maka compres compres
• Morse tapers maka igwe-ngwaọrụ
• Akụkụ na-agbagharị maka turbines.
Fives na-ezute nkọwa nke ụdị niile nke teknụzụ dị elu nke ụlọ ọrụ aerospace na usoro nke na-ekwe nkwa ntinye aka na-adaba adaba nkenke ma ghara ibibi elu elu, karịsịa mgbe ị na-ezukọ akụkụ na-emebi emebi.
Mwepu na-ada mbà na ịkwado ntanetị na ntaneti
Mwepụ na-ada mbà ịkwado ọdụ ụgbọ
Ọkụ na-agba agba na-agba agba nchara Flange
Egwuregwu Na-agba Ọkụ Fitting Machine